Ọ dị mma maka onye afọ 70 ịgba ịnyịnya ígwè? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Ndị agadi na-agba ịnyịnya ígwè - nduzi kachasị
Ndị agadi na-agba ịnyịnya ígwè - nduzi kachasị
Ọ dị mma maka onye afọ 70 ịgba ịnyịnya ígwè?
Eziokwu bu,anyịnya igwezuru okenchebemaka ndị agadi na enwere ọtụtụ ihe atụ iji gosipụta nke a. Otu nnyocha e mere na nso nso a na United States na-egosi na ndị agadi mejupụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30% nke ndị na-agba ịnyịnya ọhụrụ na nso nso aafọ. 31% nke ndebanye aha makaigwe kwụ otu ebeihe omume ahụ sitere n'aka ndị agadi karịrị 55.Sep 5 2019
You nwere ike ime agadi karịa ịmalite ịgba ịnyịnya ugwu? Ọfọn, na-eche na ịbụ agadi pụtara ịbụ onye na-erughị eru, mgbe ahụ ị nwere ike ịka nká ime ọtụtụ ihe, mana n'ezie anyị maara na nke ahụ abụghị ikpe. Dị nnọọ ka ndị nọ n'afọ ndụ niile Mgbatị ahụ dịgasị iche, ụzọ igwe kwụ otu ebe dịgasị iche na nsogbu. Yabụ ọ bụrụ na ị dabara adaba iji gbaa ịnyịnya ígwè na-agagharị n'obodo, ị nwere ike ịnya ịnyịnya igwe n'elu ugwu nke ọma n'okporo ụzọ ndị mbido.
Ma gịnị ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwere ya ọzọ? Anaghị m ahapụ Steven ruo elekere 12:30 nke ehihie, wee ruo oge ahụ ọ ga-anya n'ụtụtụ ụtụtụ niile - mgbe ọ kwọsịrị n'ụlọ ya ebe a.
Otu ụbọchị, mgbe m mere agadi, m nwere ike inwe ume dịka ya. Steven bụ otu XC ma ọ bụ ndị na-agba ugwu ugwu. Dị ka ọ dị na ski na ọsọ na-agba ọsọ, ọ na-elekwasị anya na ntachi obi na ọsọ.
Ezie na taa XC igwe kwụ otu ebe nwere ike ijikwa bump na tụlee, jiri ya tụnyere nzọ ụkwụ anyịnya igwe ha siri ike ma sie ike jiometrị nke na-etinye gị n'ọnọdụ ike, ịga n'ihu na-eche ihu. Steven na-agba ịnyịnya ịnyịnya ígwè XC ya na ụzọ ụkwụ kachasị sie ike site na jumps na tụlee iji mee ka ọsọ gị. N'oge anwụ na-achasi ike na South Florida nke ehihie, ọ fọrọ nke nta ka mmiri gwụ m iji na-esochi ya.
Ogologo oge ole ka Steven na-agba ọgba tum tum? (Clip) heard nụrụ nke ziri ezi, Steven malitere ịgba ịnyịnya ígwè ugwu mgbe ọ dị afọ 55. Ya na nwa ya nwoke gbagoro n'okporo ámá ahụ wee manye ya n'okporo ụzọ n'ihi na e gbochiri ụzọ ahụ. Ihe ndị ọzọ bụ akụkọ ihe mere eme.
Ugbu a, echeghị m na 55 ma ọ bụ 62 emeela ochie, mana m na-enweta ozi ịntanetị site na ndị mmadụ nọ na ha forties na-eche ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịmalite igwe kwụ otu ebe, nke ọma, kwụsị ịjụ onwe gị ma malite ịnya. A maara Richard nke ọma ebe a na Markham Park. Richard na-anwale atụmatụ niile n'onwe ya, site na mkpumkpu okwute iji tụlee ka ọ jumps ọkachasị jumps.
Tebụl ọhụrụ a na berm a dị mfe nnọkọ site na ịgafe akụkụ nke ụzọ ahụ. Ahụrụ m ọtụtụ ndị mmadụ na-anya nke a taa - Richard bịakwa. Mụ na Richard nwere ụdị ịgba ịnyịnya yiri nke ahụ, ebe ọ bụ na anyị enweghị afọ ojuju na ị gafere ụzọ ụkwụ.
Ihe ọ bụla enwere ike ịnweta igwe kwụ ọtọ bụ egwuregwu dị mma. Richard nwekwara ezigbo igwe kwụ otu ebe maka ọrụ ahụ. Ọ bụ ezie na igwe kwụ otu ebe Stevens na-ejikarị XC, Richard na-agba ịnyịnya ígwè na-aga ebe a na-atụfu mmiri na ọtụtụ njem.
Mgbe ọ gbasịrị motocross maka ọtụtụ ndụ ya, Richard enweghị ike ịkwụsị ịwụli elu. N'iburu otu ihe na-egbu mgbu na motocross, ịgba ịnyịnya ugwu bụ n'ezie ihe na-adịchaghị ize ndụ, mana ọ bụghị na ọ naghị enweta ike na-adịghị ike. Ahụla m ndị ọgbọ m gafere ụfọdụ ọrụ Richard rụzuru n'ime ya.
Ma Richard na Steven nọ ebe a n'ụzọ ndị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwụsị izu ọ bụla ma n'eziokwu, e nwere ọtụtụ ndị nọ n'ọgbọ ha na-esonye na agbụrụ agbụrụ. Maka onye ọ bụla na-eme egwuregwu, nke ahụ agaghị abụ ihe ijuanya. Ndị na-agba ịnyịnya ugwu, ndị na-awagharị mmiri, ndị na-arị ugwu, na onye ọ bụla nọ n’etiti ahụ maara mmadụ ole na ole nke afọ abụọ na-eme otu ihe ahụ, ma ọ bụ na ama egwuregwu na McDonalds ma ọ bụ dị ka ụmụ aka, enweghi ọtụtụ ihe ga-adị oke nká.
Omume dị ka ịgba ịnyịnya ugwu bụ ụzọ dị mma iji mee ka uche gị na ahụ gị dị obere. Ọ bụ ihe ị nwere ike imeziwanye ngwa ngwa ma jiri ya tụọ ahụike gị na ike gị. Laghachi na ajụjụ mbụ anyị, echere m na ị nwere ike ịka nká ka ị ghara ịmalite ịgba ịnyịnya.
Daalụ maka ịkwọ ụgbọala m taa m ga-ahụ gị oge ọzọ.
Ogologo oge ole ka ndị agadi kwesịrị ịgba ịnyịnya ígwè?
Okenye karịrị afọ 65 ndịnọkwasiọ dịkarịa ala minit 30, ugboro atọ n'izu ka ọ ga-abụ na ọ gaghị enwe afọ ojuju metụtara afọ na ịrụ ọrụ nke ọma, ma e jiri ya tụnyere ndị toro eto na-eje ije maka mmega ahụ, dị ka ndị nchọpụta Mahadum Humboldt State si kwuo.Sep 2 2020
Yabụ na ị pịrị 50 ma ọ bụ 60 ma ọ bụ 80, nke a apụtaghị na ị gaghị eyiri uwe mwụda spandex ma ọ bụ uwe a na-ejide ọnụ ọgụgụ, ọ pụtaghị na ị ga-akwụsị ịnya ịnyịnya ígwè, jụọ otu n'ime ndị na-eto eto anyị bụ ndị na-eto eto. Ndị agadi Santa gụnyere ịnyịnya ígwè Bicycleclub Hi Abụ m Edwin Crosswhite Abụ m Onye isi ala nke Ja Louise Abụ m onye ochie ochie na-agba ịnyịnya ígwè m gbara ịnyịnya na 1973 ma chọpụta na ịgba ịnyịnya bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ m. dị nnọọ mpako na ha na Sops na-akpakọrịta, ha dị ebube na-eto eto ọzọ ma dị ike ma emere m ụfọdụ ezigbo ndị enyi ebe a na Ramone bụ otu n'ime ezigbo ndị enyi m. Aha m bụ Ramon Montoya, abụkwa m onye Santa Fe New Mexico, enwere m obi ụtọ na ndị niile m nwere ọtụtụ ndị enyi, naanị m na-anụkwa ya n'ihi uru ahụike m na-achọghị tupu ị mara ihe masịrị m banyere SOPs Achọpụtara m ọtụtụ ikike ọhụrụ nke m na-amaghị banyere ya. Anyị na-aga ebe dị iche kwa izu, nke ahụ bụ eziokwu na anyị bụ SOP Ndị Santa Fe Seniors na ndị ịnyịnya iri isii ma na-etolite ya na ndi nwoke na ndi nwanyi kariri afọ 50 Santa Feseniors na igwe eji agba oso bu otu ndi na-acho ugbo ala nke ndi n’acho ugboala ndi choro igha n’uko otu ugbo n’izu.
Njem anyị nwere nkezi nke ndị ọkwọ ụgbọ ala 20 ma anyị nwere ọ dịkarịa ala njem abụọ kwa izu n'izu dị iche iche iji kwado usoro nke ndị otu anyị niile. Anyị draịva-akpọrọ anyị niile na SantaFe ebe, inyocha obodo n'okporo ámá ebe nkiri na-enweta mara mma ebe New Mexico nwere na-enye. Ndị Hesselbein anaghị esiri ike ịhụ n'okporo ámá ndị na-ebu omenala ha. e mere na-acha uhie uhie na odo Viking uwe na sobbing stencil na ha jesie.
Lelee ebe nrụọrụ weebụ anyị na wwlp.com kalenda mmekọrịta anyị nwere ihe ọ bụla maka mmadụ niile, gụnyere ịgagharị igwe kwụ otu ebe na ọbụnadị njem abalị dịka njem anwansi anyị nwere ụbọchị atọ, na Tọzdee ọ bụla anyị na-enye nhọrọ abụọ, ma ọ bụ ọsọ ọsọ 30 ruo 60. ma ọ bụ nwayọ nwayọ nke 30 -Mile njem mmụta mpempe akwụkwọ na-enye mgbe niile n'aka nri. Side inn na kọfị akwụsị bụ akụkụ nke anyị na-emebu eme.
Otu onye ndu maara ihe na-elekọta ndị ọkwọ ụgbọ ala anyị niile, anyị na-enyekwa onye na-ekpochapụ ihe nke anyị na-achọ ịkpọ dike anyị n'ihi na ọ na-eje ozi dị ka onye na-ekiri anyị ike n'azụ na-echebe ndị na-adịghị ọcha ka ndị New Mexico Mexico na-eri ha, ọ masịrị m ịnọ na n'èzí. ụwa na ilegharị anya ị nwere ike ịhụ ihe ị nwere ike ịkwụsị ma nụ isi okooko osisi ọhụrụ Mexico ga-abụ otu n'ime ebe kachasị mma na United States north north Mexico na-eme ugwu ugwu ugwu dị ịtụnanya obere obodo dị ịtụnanya m bụ devin del sol m 'LouSimon na anyị bụ ezigbo ndị enyi igwe kwụ otu ebe ma anyị amatala onwe anyị site na klọb ma gbaa ịnyịnya ígwè kwa afọ niile otu otu ngwa ngwa na B otu nwayọ nwayọ na-abụ onye na-agba ọsọ na-anwụ anwụ ruo mgbe m mepụtara akwa maka afọ ole na ole gara aga. igwe kwụ otu ebe ọ bụ nnukwu ihe ọ .ụ. Afọ anyị na-amata mmezu na ọrụ Ndị otu anyị maka klọb nwere asambodo mmeme onyinye a na-enye ndị otu sitere na Onye Kachasị Mma nke Rider na Ọtụtụ Ndị Nlegharị Anya, ọ nweghịkwa onye otu na-aga n'ụlọ efu n'ihi na ndị na-akwado anyị na-achọ ịnye ngwa igwe kwụ otu ebe. Ọtụtụ ụlọ ọrụ Santa Fe na-enye Seniorson Bikes Club nkwado dị ukwuu iji kwalite nkwado na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ ịgba ịnyịnya na obodo ma anyị na-ekele ha na anyị na ndị Njikọ nke ndị America Bicycists na-akpakọrịta na n'ikpeazụ, ọ bụ ezie na aha ndị agadi na Bikes na-egosi geezer nkpuchi, anyị nọ n'ebe dị anya site na ya, anyị nwere naanị otu echiche maka ịkpa ọchị na ịhụnanya maka ịgba ịnyịnya ibu Ya mere ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ị hụrụ ma ị chere na ị dị oke mma na-acha uhie uhie na odo lycra, bia sonyere anyị, lelee weebụsaịtị anyị na wwlp. com, ma gaa na kalenda anyị na-anya ụgbọ ala, dejupụta ya kọntaktị fọm ahụ ma ọ bụ zitere anyị ozi email na ama dị na Santa Fe sopscomm ihe a na-esi na SOPsyou
Ndi ịnyịnya ígwè dị mma karịa afọ 60?
Mgbe ndị agadi kwụsịrị ịrụ ọrụ, ọnụọgụ nke ahụ ike na-agba ọsọ ọsọ na ha na-aka nká ngwa ngwa. Na nyocha nke tụnyere ahụike nkendị na-agba ígwèndị dị n'agbata afọ 55 na 79 ruo otu ìgwè ndị na - abụghị ezigbondị na-agba ígwènke otu afọ, ndịndị na-agba ígwèdị mma karịa.Cygba ígwènwere ike ime ka ndụ gị dịkwuo elu site na mbenata ihe ize ndụ nke ọrịa na-adịghị ala ala.
Nabata na ihe ọzọ nke Jụọ GCN ihe ọ bụla - Ee, n'izu a anyị ga-ekwu maka nsogbu ọzụzụ metụtara afọ na mpụga ihe ngosi GCN. Aga m ekwu okwu banyere ihe 100 pound ga-enweta gị ugbu a, nke ọma na 10 afọ gara aga ọ bụghị. - N'ezie anyi g'eme.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ịbanye n'izu na-abịa n'izu ọzọ ị nwere ike iji hashtag #torqueback na mgbasa ozi mmekọrịta, ma ọ bụ ọbụna dị mfe, hapụ ha na ihe ndị dị n'okpuru isiokwu a, mana ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara ọzụzụ ị nwere ike iji hashtag #askGCNtraining ị ga-enwe ohere iji merie ọnwa atọ. Ndenye aha n'efu na Zwift, ya mere ọ bara uru maka otu ọgbọ dị iche iche. 'Abụ m 45 ma chọpụta na ahụ m na-agbanwe.' Ana m agbake nwayọ nwayọ, m na-efunahụ ihe mgbawa 'na agagharị, iji kpọọ aha ole na ole. 'Ọ dịchaghị mma maka Bjarne ugbu a, ọ bụ? - mba. - 'Mana agụrụ m otu isiokwu gbasara otu nwoke ọgbọ m si eji obere oge 15-nke abụọ kachasị elu' dị ka akụkụ dị mkpa nke ọzụzụ ọkara marathon ya. 'Otu onye ochie na-agba ịnyịnya ígwè nwere ike ịmụta ihe na nke a?' Have nwere aro dị ka '' Gụnye sprinrin na ọzụzụ m '' oleekwa otu esi eme ha? “Azịza ya bụ ee ee ee.
Enwere otutu ihe ị ga - enweta maka onye na - agba ịnyịnya ígwè toro eto nke na - etinye sprining na ike ọzụzụ n’ime mgbatị ha. ka ị na-emewanye okenye - Ee, ọbụghị na ị nwere nke ọ bụla, Dan - Damn it! (James chịrị ọchị) Amalitela m; Ma m chere na ị bụ eziokwu, ihe ị nweghị ike ifu gị, ka ị nwere ike? Mana ozi ọma ahụ bụ na ị nwere ike belata ihe omume a akpọrọ sarcopenia site na ị na-arụsi ọrụ ike. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịnọghị na-arụsi ọrụ ike, ị nwere ike nweta ihe ruru 5% nke akwara gị mgbe afọ 30 gachara. afọ iri - (rie) Wow! - Ọfọn James dị mma, ọ bụghị ọbụna 30. - Ee, kpọm kwem.
Ọfọn, 'jiri ya ma ọ bụ tufuo ya' bụ ahịrịokwu nke na-abata n'uche, mana site n'ịgbakwunye ike na ọrụ ịgba ọsọ na ọzụzụ gị, ọ na-eme ka ikike ikuku gị na mitochondrial dịkwuo elu. - Mm-hmm, ọ dị mma. - M kwuru ya nri? - Ee e mba n’ezie; emechi James.
Ee, a maara mkpụrụ ndụ mitochondrial dị ka mkpụrụ ndụ nke ahụ n'ihi na ha nwere ọrụ maka ịhapụ ike site na nri. Ma ebe ọ bụ na mbelata nke akwara na-edugakwa nbelata ogo na oke nke sel gị mitochondrial, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na a ga-anọgide na-eji ọzụzụ dị arọ iji jigide akwara ahụ, enwere olile anya na ọ ga-ejigide ma ọ bụ ikekwe ọbụna ịbawanye arụmọrụ gị na igwe kwụ otu ebe. Enwere m ajụjụ ọzọ metụtara ọzụzụ, yana ajụjụ ọzọ gbasara afọ Conor Williams.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, 'VO2 ọ na-agbanwe na afọ?' - Ọfọn, ezigbo ajụjụ, ọ nwere ike inye azịza ọsọ ọsọ. Ọ bụ ya. Ma mgbe ahụ, enwere ọtụtụ ihe nwere ike ịgbakwunye na nke ahụ bụ mkpụrụ ndụ ihe nketa, nke ahụ bụ afọ gị; nke a bụ ọnọdụ ọzụzụ; Enwekwara ahụ ahụ.
Yabụ enwere ọtụtụ ihe ịme, ee. - Enwere ọtụtụ, mana anyị emegoro nyocha na ya, yana o doro anya na VO2 max gị nwere ike ịdaba 1% kwa afọ site na afọ 25, nke pụtara na ị tufuru naanị 1%, nri? - Ee - efuola m ise. - 5%, ị ji n’aka banyere nke ahụ? - All ziri ezi, 13%. - Ee - Agbanyeghi na enweghi m ike nihi na odi ka odi ka, di ka nzaghachi nye ajuju ajuju, i nwekwara ike belata mgbada a na VO2 max site na mgbatị.
N'ikwu okwu banyere ya, mmega ahụ nwere ike ịgbanwe nke ọma VO2 max gị, mana ọ ruru 20% site na mmega ahụ na mmega ahụ.- Nke ahụ dị ọtụtụ. - Ya mere enwere olileanya maka anyị niile.
N'ikwu okwu banyere nke a, anyị nwere otu isiokwu gbasara otu ị ga - esi bulie VO2 max gị nke ị nwere ike ilele ugbu a. - Tupu anyị gwa gị, anyị kwesiri ịkọwa kpọmkwem ihe ọ bụ. VO2 max bu ihe nlere banyere okuku oxygen aru gi nwere ike itinye n'oge kachasi ike.
A na-atụkwa ya na milliliters kwa kilogram nke ịdị arọ ahụ kwa nkeji. Ugbu a bụ oge maka ngwa ọkụ ọkụ. Ajuju mbu wee si na okimy. ‘N’oge na-adịbeghị anya, amalitere m imegharị ahụ́. 'Sprints bụ akụkụ nke ọzụzụ a' mana n'ihi ihe ụfọdụ, ahụrụ m arụmọrụ Sprint mbelata na mbido, rute 45 km / h, ugbu a naanị 41.
You maara ihe kpatara ya? Nke ahụ ọ bụ? - Ọfọn, nke mbụ, ị kwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na-agba ọsọ iji tụọ arụmọrụ gị n'ihi na enwere ọtụtụ ihe metụtara nrụgide ikuku na ịgbagharị na ntụgharị ikuku, wdg. Ọ bụrụ na ị jirila mita ike, ị nwekwara ike chọpụta ntakịrị mbelata na arụmọrụ gị dị ka ọ dị ka ị naghị etinye obi gị dum na mgbatị ahụ ị mere, yabụ ike gwụrụ gị. ịghagharị eriri anụ ahụ nke na-agwụ ike na-agwụ ike ngwa ngwa, aka nri, karịa eriri gị na-eme ngwa ngwa na-atachi obi.
Yabụ ihe ị ga - eme bụ ịnabata ọzụzụ niile ị na - eme ma dịkwa ọhụụ ọhụụ iji mezuo obere oge ahụ siri ike. Maka na achọpụtara m na oge dị mkpirikpi, ị ga-adị ọhụrụ karịa inye ihe kachasị mma. Yabụ na ị ga-adị ọhụrụ karịa iji mezuo ugwu ugwu nke nkeji abụọ na ise, dịka ọmụmaatụ, karịa maka ịgba ọsọ n'okporo ụzọ na-ewe awa ise.
ịnyịnya jeans ụmụ nwanyị
Ma ọ na-agbada ruo 10 sec. Na-ekele, ị ga-adịrịrị ọhụụ nke ọma iji mee ihe kachasị mma. - Ekwenyere m. - Ọzọ anyị nwere nke a site na Mike Smith: 'Ego ole ka 100 pound ga-eme m taa, ma e jiri ya tụnyere 10? afọ ndị gara aga? 'Ọ bụ ihe na-akpali mmasị, nke a.
O foduru anyị ntakịrị, mana anyị chere na anyị echepụtala ihe. - Ee, echere m maka ya ogologo oge. Echere m banyere ịzụ 100 pound nke akpụkpọ uwe na 'ụbọchị ndị a ha na-eji a otutu technology ike nri airflow, a dị ọcha airflow n'elu ahụ gị na-eme ka ị nke ukwuu ngwa ngwa.
Yabụ ee, ọ ka mma karịa afọ 10 gara aga, akpụkpọ ahụ dabara. - Nke ahụ bụ ihe niile anyị bịara wee nwee nnukwu ọdịiche, ọ bụghị ya, akwa ị na-eji, wdg.Ya mere ọtụtụ oge ndị na-ekpe ikpe na-amaghị na ha kpuchie na lycra site na isi ruo n'ụkwụ n'ihi na ọ dị ngwa karịa akpụkpọ ahụ. . - Ha bụ.- N'elu nke ahụ, 100 pound, dịka ị maara nke ọma, ọ dị nwute na ị gaghị erute ụwa nke ihe ndị na-agba ịnyịnya ígwè- Mba, ọ dị mwute.- Na-esote, #AskGCNtraining bụ hashtag nke MASTERJM 13 , 'Olee ot I um ga-esi nwee ntachi obi mgbe m b u nwatak ir i? '- Ọ dị mma, ntachi obi abụghị naanị imega ahụ; Ọ bụkwa banyere ịnọgide na-enwe ezigbo ahụ ike, na-eso nri siri ike, yabụ ndị a bụ ihe. - Eeh, mana ikwesighi ichegbu onwe gi banyere ntachi obi dika nwatakiri, echere m. - Mba - Dabere n’afọ ole ị dị.
N’ezie, mgbe ị dị afọ iri na asaa ma ọ bụ iri na asatọ, ị nwere ike bido imega ahụ nke ọma, mana mgbe ị dị afọ iri na abụọ ma ọ bụ iri na atọ wee pụọ, nwee obi ụtọ ịgba ịnyịnya ígwè na ike na ume ga-abịa nke ị na-ekwesịghị ichebara echiche karịa. Na-esote, Jairus loo: 'Hey, M na-eche' ị ga - ahọrọ igwe kwụ otu ebe dabere na okpokolo ya 'ka ọ bụ akụkụ ya? Ugboro ole na ole tupu. Ọ bụkwa ihe na-adọrọ mmasị.
Azịza ya bụ mgbe niile, ọ dabere na ego ole ị ga-achọ imefu na igwe kwụ otu ebe gị, ọ bụghị ya? Ya mere ọ bụrụ na ị nọ na mmefu ego ma ịchọrọ iji nke ahụ mee ihe, nye ya You're na-etinyekwu ego na-arụzi ọrụ ịnyịnya ígwè ị nwere, ịchọrọ ezigbo nguzozi n'etiti etiti na akụrụngwa, ọ bụghị ya? Wepụta ọdịnihu gị igwe kwụ otu ebe, họrọ nke kacha mma eku --- kacha mma etiti, M ga-asị ee. M ga-isi na-amalite dị ka achicha, na-ewu site na isi elu. Ogwe ahụ bụ akụkụ buru ibu nke igwe kwụ otu ebe, yabụ m ga-eleba anya ma m bụ onye na-arị ugwu ma ọ bụ onye na-agba ọsọ ma họrọ etiti dị iche maka ihe atụ ahụ wee sizie ebe ahụ wee rịa ọrịa ma ọ bụ merụọ ahụ? Ọzụzụ maka ihe omume? 'Olee otu ị ga-esi laghachi na egwu ozugbo o kwere mee?' Nke ahụ sitere na slam031 n'okpuru ihe ngosi nke izu gara aga - Ọfọn, m ga-aga ozugbo wee kwuo, jụụ kachasị mma.
Chere ruo mgbe ị ga - enwe 100% ahụike iji laghachi n’igwe gị. Ihe ikpe azu ichoro ime bu ime ka oria a di ogologo. Yabụ, ị ga-ekwenye na nke ahụ? - Eeh, enwetara m ndụmọdụ site n’aka onye na-enye ọzụzụ ọtụtụ afọ gara aga: ụbọchị ị chere na ị kwesịrị inwe ike ịlaghachi azụ wee zụọ ike, hapụ ya ruo ụbọchị na-esote, nke bụ ndụmọdụ mgbe niile echere m na ọ rụụrụ m ọrụ n’onwe m n’ihi na ọ bụ niile dị mfe ịtụ ụjọ ma gbalịa ịlaghachi ozugbo enwere ike, ọ bụghị ya? - Ee.- Gbalịakwa imeju ihe ndị funahụrụ gị.
Ikwesiri idetu mpempe akwụkwọ ahụ wee malite site na atụmatụ ọzụzụ ọhụrụ wee ghara ịnwa ime okpukpu abụọ ihe i mere na mbụ.- M ga-ekwenye 100 %.- Aka nri, ajụjụ ikpeazụ banyere gburugburu ọkụ ọkụ, ọ bụrụ na m gụnyere. 'na na ngwa ngwa na niile.
O sitere na Klemen_46: 'Ọ ka mma' iri nri karịa tupu ma ọ bụ mgbe ịgba ịnyịnya ígwè? 'I meela, ndị m hụrụ n'anya.' Daalụ maka nke ahụ.- Ọfọn, ama m na ị maara azịza nye ajụjụ a.- Amaghị m; Enweghị m elo ọ bụla.
Ọzọkwa echebara ya echiche nke ọma. Echere m, ị ga-eri nri tupu ịnya, ma abalị ahụ ma ọ bụ nke ụtụtụ - Iji nye gị ike ahụ - Ee, iji nweta ụlọ ahịa glycogen gị ọsọ ọsọ tupu gị ejiri ha niile. Na mgbe ị jirila ha niile, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịrụ ọrụ nke kachasị mma, mgbe ahụ ịkwesịrị imeju ha ọzọ.
Ọ bụrụ na e nwere ndị na-edozi ahụ n’ebe ahụ ndị nwere ike ịgwa anyị, ọ bụrụ na ị nwere nhọrọ, rie tupu ma ọ bụ rie nri mgbe ahụ, kedu nke ka mma? Nwere ike mee ka anyị mata. - Yabụ ajụjụ na - esote sitere n'aka James Hickman, '#Torqueback Dị ka onye na-agba ịnyịnya ígwè na-ebido ogologo njem, m ga-amalite ilele mita mita ike, ndị nlele obi obi ma ọ bụ sensọ cadence? 'Hà ruru ego itinye ego na ya?' - Azịza ọzọ dabere na ya. - Eche m. - Ọ dabere na ebumnuche ịgba ịnyịnya ígwè gị ogologo oge ga-abụ.
Echere m, ọ bụrụ na ị bụ ụdị onye hụrụ n'anya ịnya ịnyịnya ígwè, na-enwe ikuku ọhụrụ, ebe ọhụụ na mmetụta nke onye bụbu, ị gaghị enwe mkpa ahụmịhe nke ịnya igwe ma ọ bụ igwe gravel ọ bụla ụbọchị. N’ezie, ị ga - ewulite ume na ume ga - enye gị ohere ịme njem dị ogologo. -Ee, mana mgbe ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ imeziwanye nnukwu mmezi ahụ, o doro anya na mita ike ga-enyere ya aka.-Echere m na ị bụ eziokwu.
Ha abụghị maka mmadụ niile; Peoplefọdụ ndị anaghị enwe mmasị ịbụ ndị ohu nye ọnụọgụ maka ebumnuche doro anya, mana ọ bụrụ na ị kpebisiri ike ị ga-akawanye ngwa ngwa o kwere mee, jiri igwe elekere yana njikọ na nyocha iji mara etu ị ga - esi mee nke ọma. na ndozi ndị a ngwa ngwa. Ee, na nkwadebe nke mmemme mmega. Igwe eletrik ga - enyere aka mgbe ịnwere data ahụ, ya mere ee.- Ọfọn, ọ bụrụ na ị na - achọ ihe isii kpatara ị ga - eji zụta mita ike ma ọ bụrụ na i kwenyeghị gị, nke ahụ bụ ihe anyị ruru n’isiokwu na - esote Okwu nke Dr.
Andy Coggin, otu n'ime ndị ọsụ ụzọ nke ọzụzụ na igwe eletrik, nnwale bụ ọzụzụ, ọzụzụ na-anwale, na igwe ike na-enye gị ohere ịnwale ule gị n'okporo ụzọ na-emegheghị ụlọ nyocha. Ọfọn, nke ahụ bụ njedebe nke Jụọ GCN ihe ọ bụla n'izu a. Anyị nwere ọtụtụ ajụjụ gbasara ọzụzụ, mana ajụjụ gị nwere ike ịbụ ihe ọ bụla metụtara ịnyịnya ígwè, akụrụngwa, wdg. Yabụ hapụ ha niile na ngalaba nkọwa dị n'okpuru, ma ọ bụ iji chetara gị na hashtag #torqueback dị na mgbasa ozi mmekọrịta. - Ee, ma ọ bụrụ n’ịchọrọ ohere iji merie ndenye aha ọnwa atọ na Zwift wee jiri hashtag #AskGCNtraining Dị ka isiokwu a, echefula inye anyị mkpịsị aka.
Enwere m obi ụtọ nke mkparịta ụka na uru ma jụọ ha ma ha bụ weirdo ma ọ bụ grinder! Vidio wee pịa ebe a n'okpuru. - Anyị nwere ihu ọma naanị maka azịza Sagan.
Kedu ka ndị agadi si agba ịnyịnya ígwè?
Atụmatụ maka cgba ígwè n'ime GịSeniorAfọ
Chebe ikpere gị Dị dị mkpa mgbe ị na-aga ije.
Debe nke gịIgwe kwụ otu ebeNa Ọdịdị Dị Mma. I ka eji otu iheigwe kwụ otu ebena i ji afọ iri anọ gara aga?
Gbalịa ọkụ eletrikIgwe kwụ otu ebe.
Gbaa ịnyịnyaMụ na ndị enyi.
Withme Ihe Banyere Nchegbu.
Mmanụ Ahụ Gị.
Kedu afọ ole mmadụ kwesịrị ịkwụsị ịnya ọgba tum tum?
Naafọna nkendị na-anya ọgba tum tum kwesịrị ịkwụsị ịgba ọgba tum tumdabere na ahụike, ahụike, na ahụike ahụike ha. Ihe ka ọtụtụ n'imeọgba tum tum akwụsị ịnyanke haọgba tum tumnaafọn’agbata afọ 60 ruo 85 dabere n’otú obi dị ha, ikike ha nwere, na iwu obodo.
Ọ dị mma maka ndị agadi ịnya ọgba tum tum?
N'agbanyeghị nkeafọnkeonye na-agba ịnyịnya, ọ bụlammaduonye kpebirinọkwasikaọgba tum tumnọ n’ihe ize ndụ dị ukwuu nke ihe ọghọm na mmerụ ahụ na-akpata ọnwụ karịa ka onye ọkwọ ụgbọ ala. Mgbeọgba tum tumenwere ikedị ize ndụmaka ihe niile,agadi ọgba tum tumnwedịrị ike ịnwe ihe ọghọm dị egwu karị itinye na mberede.10 jul. Dec 2019
You nwere ike ịbụ agadi karịa ịgba ịnyịnya ígwè?
Gba ígwè bụmgbe ụfọdụ a na-ewere dị ka ụdị mmega ahụ na anụrị maka naanị ụmụaka ma ọ bụ ndị nwere mmasị na egwuregwu. Otú ọ dị, mgbegịbee azụ elu nkeịgba ígwè, ọ bụ egwuregwu nabuzuru oke maka onye obula, tinyere ndi mmaduafọnke 60!
Bikgba ígwè dị mma maka ndị agadi?
Mgbemmega ahụegosila na ọ na-eme ka ọbara gbubiga ụbụrụ nke ukwuuagadi. Naanị 30 nkeji nkeịgba ígwèna mgbe niile egosila na ị nwere uru mmuta dị mkpa, ọkachasị maka ncheta na mmụta.15 jan. Dec 2019
Gịnị bụ ndị fọdụrụ n'ezinụlọ ọgba tum tum?
O yiri ka n'ime ụdị ndị a na-echebara na eserese ahụ, Harley Davidson dị umeala n'obi nwere ike ịnwe ike, ndị nwekwa Harley nwere ike ịnụ ụtọ haọgba tum tumrue mgbe gafere afọ 25 nke onye nwe akara. Yabụ n'ebe ahụ ị nwere ya, Harley Davidson na-eme yakasị dịtee adịgide ọgba tum tumụdị.04.01.2017
Ọ dị iri afọ ise na ise ịmụta ịgba ọgbatumtum?
Are dịghị mgbetoro eto ịmụ iheihe ọ bụla, hapụ yana-agba ọgba tum tum. May nwere ike ịchọta oke ọnụọgụ dị njin dị ihe dị egwu ile anya, mana buru n'uche na ịchọghị 1000cc iji kụọ ha nnukwu ọsọ, n'otu oge ị chọghị iti ha nnukwu ọsọ iji nwee ọ yourụ oge na aigwe kwụ otu ebe.
Afọ iri anọ agafeela ugbu a ị mụta ịgba ọgba tum tum?
40abụghịemeela agadi ịmụ iheesigbara ịnyịnya ígwè, enyi m nwoke zụtara nke mbụ yaigwe kwụ otu ebena 39, GSX1000R, agwara m ya na ọ bụ mkpụrụ n'ihi na nke a dị ize ndụ n'ihi eziokwu ahụigwe kwụ otu ebenwere ike ime 320km otu awa. Otú ọ dị, ọ megidere mkpebi m ma mụtawo yanọkwasiọ dị mma nke ukwuu.Sep 1 2013
Onwere ndị okenye na-agba ịnyịnya igwe ha?
- Obi ụtọ na ndị na-agba ịnyịnya ma ọ bụrụ na ha niile amụmụ ọnụ ọchị. Anyị bụ ndị nọ n'ọrụ otu nke ma ndị nwoke ma ndị nwanyị karịrị 60 ndị na-agba ịnyịnya ígwè anyị gburugburu afọ maka obi ụtọ na ọ enjoyụ. Anyị nwere otu ịnyịnya kwa izu na ụbọchị dị iche iche, mana ọ dịkarịa ala Wednesday na Friday. E nwere ìgwè anọ - Tigers, Pacers, Cruiser, na Easy Riders.
Enwere njem nlegharị anya ọ bụla dị mkpa na Ohio?
Bike Ohio si ụzọ ụkwụ kachasị mma soro anyị! Ndị okenye na-agba ịnyịnya ígwè maka ndị agadi & nkwupụta ụda; ndị okenye nọ n'ọrụ dị afọ 50 na karịa. Ma ọ bụ Florida Keys, Canada, ma ọ bụ isi ihe dị n'etiti… Anyị na-ekwe gị nkwa na ọ pụrụ iche, fun na enyi na enyi njegharị!
Afọ ole ka ị ga-aga ịgba ịnyịnya ígwè?
Book a Tour Senior cgba ígwè na-enye anyị ịnyagharị ndị agadi & nkwupụta ụda; ndị okenye nọ n'ọrụ dị afọ 50 na karịa. Ma ọ bụ Florida Keys, Canada, ma ọ bụ isi ihe dị n'etiti… Anyị na-ekwe gị nkwa na ọ pụrụ iche, fun na enyi na enyi njegharị! Njem nlegharị anya anyị na-enye ọtụtụ ahụmịhe nke avast. Banyere